Ndeapi matanho akasarudzwa pazvinzvimbo zvipfupi? | Ehupfumi Zvemari
Imwe yemaitiro anoshandiswa nevashambadzi vadiki nepakati kuratidza kuti ndedzipi tsika misika yemari iri pasi payo kutengesa kukuru nemari uye nevamiriri vezvemari. Muzviitiko zvese vanofanirwa kuburitswa muNational Securities Market Commission (CNMV). Muzviitiko zvese ivo vachakupa iyo isinganzwisisike chiratidzo uko mashandiro ari kuenda nemaoko akasimba emusika wekuyera uye ugokwanisa kuishandisa iwo kuti ubatsirwe iwe pachako.
Mune yazvino wave yeaya data ayo anoona kuti ingave iri nzira ingangotorwa mukuchengetedzwa kwakanyorwa, zvimwe zvinhu zvine hungwaru zvinoziviswa izvo zvinogona kukubatsira kufambisa mashandiro ako kubva zvino zvichienda mberi. Imwe yeakanyanya kukosha, uye kuti aive mumasumbu emakwenzi emusika wemasheya, zvinoratidza kuti mugove wezvokudya Día inoramba iri imwe yemakambani akawanda ari pasi pekumanikidzwa kubva kumari yebere. Nemhirizhonga pakutengesa kwakapfuura mumavhiki apfuura kubva pa11,45% kusvika pa12,5%.
Aya madhata akakodzera anoratidza chikonzero chekushanduka kwekambani yakanyorwa mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35. Iyo yakave nekuderera kwakadai kuti yaenda pazasi peyuniti yuniti, uye zvakanyanya kunyanya pamatanho ari padyo ne0,70 euros pamugove. Nekudzikira kwepamusoro-soro mumakore achangopfuura kubva kudzoreredza maitiro aro kumusoro kwaisazova neimwe sarudzo kunze kwekukoshesa ne150%. Chinhu icho nhasi hachisi kuzoitika uye isu tinotya kuti chingatowedzera. Icho chiri chokwadi chakapihwa neiyi kukosha iyo makore mashoma apfuura yakanga ichitengesa pamatanho e6 euros.
1 Kuchengetedzwa kunoenderana nekutengesa kumanikidza
2 Kushushikana pazvinzvimbo zvaBanka
3 Takura nzvimbo muAcerinox
4 Mhosva isinganzwisisike: Endesa
5 Dzimwe tsika dzakarwiswa
6 Sei kududzira kufamba uku?
Kuchengetedzwa kunoenderana nekutengesa kumanikidza
Iyo data yakapihwa neNational Securities Market Commission (CNMV) inoratidza rumwe ruzivo rwunogona kushandiswa nevashambadzi vadiki nepakati kubva ikozvino. Semuenzaniso, kuti imwe yekuchengetedzeka ndeyeye kambani yekuvaka yeVillar Mir, OHL, inova kambani yechipiri iyo mari yemabhizimusi ine hukuru hukuru, hapana zvishoma pane pamwe ne9,2% yezvikamu. Mushure mekupedzisira wave yakapihwa neCNMV yaburitsa pachena kuti mapere akauya kudzora 9,78% yezvikamu zvekambani iyi paIbex 35.
Iwo mumwe muenzaniso wakajeka weizvo zvinogona kuitika muSpanish equities sezvo OHL yave iri imwe yetsika iyo hunhu hwakaipisisa izvo zvavave nazvo musarudzo yenyika. Iine kurasikirwa kwakapetwa kaviri manhamba mukati memwedzi wega wega uye izvo zvakatungamira mukukurudzira kwakasimba mumwedzi ichangopfuura. Kana zvirizvo zvaiitika mumisika yezvemari yaive ndege huru muzvikamu zvekukosha uku muchikamu chekuvaka. Hazvishamise kuti ichiri chimwe chevanonyanya kushomeka mumisika yezvemari uye ivo vaita kuti varidzi vemari vaive nenzvimbo dzakawanda mumatunhu avo varasikirwe nemaeuro mazhinji.
Kushushikana pazvinzvimbo zvaBanka
Bhengi kubva kubhengi rekare rekuchengetedza ndeimwe yeakanyanya kubatwa nekuita uku kwebheya mari. Kwete pasina, zvakatambura sezvo mukupera kwaNovember aya mabheya akawedzera kumanikidza kwaro guta guru, kubva 4,01% kusvika 4,21%. Haisi iyo yakakosha muzana, asi zvirinani inotsanangura kushanduka kwezvikamu zvayo muchikamu chekupedzisira chegore rino. Iyo zvakare imwe yeanonyanya kukoshesa tsika mumari yemari yemari mumwedzi ichangopfuura.
Kune rimwe divi, zvakare zvinoshamisa kuti iro boka rezvemari rinobatana neyakajairika mamiriro ebhengi. Nekuti zvirikuitika, mazhinji emabhangi akanyorwa pamari yenyika akatambura munguva ino kuwedzera kwenzvimbo dzechikwata chikamu chemari yekudyara. Semuyenzaniso, Bankinter iyo yabva pa1,19% kusvika pa0,73% uye muSabadell, kubva pa1,77% kusvika pa1,76%. Mapoka akasara emari anga ariwo pasi pezviyero izvi kuti mitengo yemigove yavo inyanye kuderera.
Takura nzvimbo muAcerinox
Aya ndiwo mamwe makambani akanyorwa anochengeta bearish bias nemaoko akasimba emisika yemari. Kunyangwe paine kusimba zvakanyanya kupfuura zvambotaurwa mushure me data iro richangobva kuchinjirwa kuNational Securities Market Commission (CNMV) uye mune izvo zvinonongedzerwa kuti ivo vanonongedza kuti iwo mapfupi nzvimbo akawedzerawo kambani yesimbi uye enda kubva ku2,72, 3,25% kusvika 1,05%. Sezviri mukambani yakagadzirwa naAmancio Ortega, iyo inotarisana nenzvimbo dzayo dzepamberi kubva pa1,24% kusvika XNUMX%. Muzviitiko zvese izvi nekudzikira kwakakomba mumwedzi ichangopfuura uye izvo zvinotsanangura chokwadi chekufamba uku mumusika wemasheya.
Kune rimwe divi, kune akati wandei emakambani akaneta mumamiriro ekutengesa, kunyangwe parizvino aine hushoma hushoma uye mune dzimwe nguva anenge asinganyanyoenderana. Sezvazviri mune chaiwo makesi emakambani anotungamira mumatanho avo emisika yemasheya senge Acciona, Amadeus, Técnicas Reunidas, Cellnex uye kunyanya Nokia Gamesa. Kusvika padanho rekuti iro rinogona kupa imwezve chiratidzo nezve kukosha uko kwedu kwekudyara kunogona kuraswa kubva zvino zvichienda mberi.
Mhosva isinganzwisisike: Endesa
Mamiriro ezvinhu ari kuenda nekambani yemagetsi Endesa ari kurova zvikuru uye kuti kunyangwe hazvo yakagadzira mwedzi usinga tsanangurike waMbudzi mukushanduka kwemutengo wayo, ne kukwira pedyo ne3%, zvimwe chete izvi hazviitike nezviito zvemari ye bearish. Iko kwave nekuwedzera kwakakura muzvikamu zvipfupi zvakawedzera panguva ino kubva pa0,61% kusvika pa0,72%. Chero zvazvingaitika, kuburikidza nemufananidzo usina kumboonekwa mumakore achangopfuura nekambani yeEnel. Iyo inogona kuve yambiro yakajeka yekudzora zvinzvimbo mune chikamu chakakoshesa zvakanyanya muzvikamu zvichangopfuura zvekutengesa.
Izvo hazvigone kukanganikwa kuti magetsi ari padyo chaizvo nekushomeka kwaanako mune ayo egore maoremu ayo ari mukati nhanho dzemakumi maviri nemaviri euros pamugove. Nemaitiro ekuda kuziva, apo pese painosvika kunzvimbo yekutengesa inova nekudonha kwakapinza kunoisa pangozi nzvimbo dzakashama nevashambadziri vadiki nepakati. Kusvika padanho rekukwanisa kunongedza mafambiro aro kuchikamu chezasi chechiteshi, pamatanho ari pakati pegumi nematanhatu negumi nemanomwe euros pamugove. Sezvazviri chaizvo zvakaitika mukati memwedzi waNyamavhuvhu naSeptember. Kubva panguva ino yekutarisa kukosha uko kunogona kuve nenjodzi kune zvaunofarira.
Dzimwe tsika dzakarwiswa
Urongwa urwu hunosanganisirawo kukosha kwemusika kwehunhu hwemugadziri wezvinhu zvemotokari CIE Zvemotokari. Zvakanaka, zvakabva pa1,94% yezvikamu kusvika pa2,16%. Iko maoko akasimba emisika yemari ari kusarudza zvakajeka kutengeswa kukuvadza kutenga. Kunyangwe paine chakanakisa chimiro icho chinoratidzwa nehunyanzvi hwekuongorora uye icho chakachiita chimwe chekuchengetedzeka nekunakidzwa kukuru padanho revashambadzi vadiki nepakati. Chimwe chinhu chakaomarara, uye zvakawanda zvine chitarisiko cheaya mareti pamari yekushomeka kwemari kuyerera.
Mune chero zviitiko zvacho, iwo data raunofanirwa kuongorora nokungwarira nekuti ivo vanokwanisa kukupa iyo isinganzwisisike chiratidzo nezvekuti yako mari inofanirwa kutungamirwa kubva zvino zvichienda mberi. Kwete chete nezve zvekutenga izvo zvauchazofanira kugadza mumisika yekutengesa, asiwo kusarudza hunhu hunofanirwa siya mari yako yekudyara. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye kunyangwe pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
Sei kududzira kufamba uku?
Imwe yemaitiro aunofanirwa kushandisa nekuuya kweiyi data kunoenderana nekugadzirisa yako portfolio yekudyara zvichienderana nenzvimbo dzepamberi dziri kusvika. Neiyi nzira, chinonzwisisika chinhu chekuita kuvandudza mashandiro ehunhu eaya akakosha misiyano. Iri basa richabatsira optimize investments uye nenzira iyi iyo purofiti yaunowana yakakura kudarika pakutanga. Kunyanya kupihwa gore senge rakaomarara kune zviyero zvakajairika seiya inoitika muna Ndira.
Kana kusagadzikana kuchange kuri dhinomineta muchikamu chikuru chechengetedzo dzinoumba indekisi inosarudzika yemusika weSpanish wemusika, iyo Ibex 35. Zvichava zvakafanira kushingaira kupfuura kare kuwana sarudzo dzakachengetedzeka mumisika iyo yakaenzana uye pamusoro pezvose ine mukana wekudzokorodza kumusoro kupfuura zvimwe zvese. Sezvazviri chaizvo zvakaitika mukati memwedzi waNyamavhuvhu naSeptember. Kubva panguva ino yekutarisa kukosha uko kunogona kuve nenjodzi kune zvaunofarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ndeapi matanho akasarudzwa pazvinzvimbo zvipfupi?